Hiran State - News: Waxgarad reer Hiiraan ah oo ka digay shir la sheegay inuu ka dhacayo London iyo fariin ay u direen C/qadir Xaaji Masale.
Waxgarad reer Hiiraan ah oo ka digay shir la sheegay inuu ka dhacayo London iyo fariin ay u direen C/qadir Xaaji Masale.
London:(HS)-Hadaba iyadoo maalmahani ay suuqa soo galeysay in uu ka dhici doono shir ay iskugu imaanayaan reer Hiiraan magaalada London ayaa ugu danbeyn macluumaad badan kedib waxaa la xaqiijiyey sidaan horeyba ugu soo daabacnay bogan in shirkaasi ay abaabulkiisa lahaayeen walaalo reer Hiiraan ah oo uu ka mid yahay Siyaasiga, rugcadaaga Somaliyeed marna ah reer Belet weyne C/qadir Xaaji Masale.
Hadaba hadaan wax yar idiin dul marno shirka uu doonayey C/qadir Xaaji Masale ujeedadii markii hore laga lahaa iyo wajiga uu hada yeeshey faraqweyn ayaa u dhaxeeya waxaana laga yaabaa maadama uu yahay shaqsi jecel horumarka reer Hiiraan inuusan la socon qaabka shirka loo weeciyey iyo sida ay uga xunyahiin waxgaradka reer Hiiran intooda badan oo reer Xaaji Masale ku ogaa wanaag mudo 20 sano oo ay Somaliya ka socotay dagaalo sokeeyana aan ka qeyb qaadan ururo siyaasadeed lagu jahwareerinayo shacabka reer Hiiraan in aanu bal sidey wax u socdaan isaga iyo shacabka reer Hiiraan u soo bandhigno sidey wax ku bilaawdeen iyo sida hada wax loo wado.
Qaabka uu ku yimid shirka hada la doonayo in lagu qabto London iyo hadafka markii hore laga lahaa.
Inta badan marka dhibaatadu batato oo uu wadan dhisnaa bur buro waxaa soo baxa umado kala fikir ah oo midkasta uu isaga maahane aysan la saxsaneyn cid kale hayeeshee dalka Somaliya maalinba maalinta ka danbeysa sidii ururo siyaasadeed loogu dhawaaqayey oo kuwo magacyo diin huwan loogu dhawaaqayey iyadoo dhamantood kuwii horey loogu dhawaaqay ay shacabku eedeen dhib badan kala kulmeen sidii ay arimaha u soo socdeen reer Hiiraan ayey ku timid. kediba aqoonyahano, waxgarad, rag iyo dumarba leh oo uu ka mid yahay Siyasiga C/qadir Xaaji Masale ayaa isla gartay bal si jawi kan ka duwan loo abuuro in leysku raadiyo reer Hiiraankii hore iyadoon loo eegeyn qabiil iyo qoys laakinse loo eego inuu shaqsigu yahay reer Hiiraan lana qabto shirar ay bal horta isku wareystaan reer Hiiraan kedibna inta aan siyaasad loo gudbin la helo dhawr shir oo lagu kala warqaado iyadoo qaaradkasta laga raadinayo shaqsiyaad reer Hiiraan ah si ugu yaraan reer Hiiraankan cusub ee dagaaladan ku soo barbaaray ee aan aqoon waxa ay reer Hiiraan ahaayeen amaba isku yahiin loo tusiyo halkaasina laga abuuro jawi ka duwan midkii aanu horey u soo arki jirnay ee dadka kala qoqobay. fikirkaasina aad ayey qofkiiba xili hore maqlay ula dhacay taas ayaana keentay in ay dadku qalbiga ka taageeraan wanaagkasta oo xal la moodo.
Maxaase ka danbeeyey sideyse arimuhu isku bedeleen waqti gaaban gudahood.
1- Waxii horey meelaha maqaayadaha ah leys kugu sheegay dad yar ayaa run u mooday tiro kalena waxey hoosta ka wateen ajendooyin u gaar ah waxaana faraha lala galay siyaasad iyadoo shir qarsoodi ah ay dhawr mar ku yeesheen London qaar ka mid ah dadka hada shirka ka weeciyey wajigii lagu ogaa. sidoo kale waxey sameysteen urur siyaasadeed oo loogu magac daray ururka Midnimada Reer Hiiraan(Mideeye) ururkaani oo u arka maamul goboleedka Hiiraan State inuu yahay maamul ay sameysteen qabiil gaar ah sidoo kalena ay kuwii ka danbeyey yahiin shaqsiyaad is magacaabay laakinse ay iyagu yahiin maamul ka duwan kuwaasi oo ka turjumaya danaha reer Hiiraan.
Xaqiiqadii shirka noocaasi ah xitaa magaalada uu ka dhacayo ee London waxgaradka jooga amaba gudiyada ka dhisan ee qabiilada reer Hiiraan ma oga shirkaan, waa yaabe maadama ay magaca ay la baxeen yahay midnimada reer Hiiraan sow xalku ma noqonayo in xitaa shaqsiga aad necebtahay ee reer Hiiranka ah aad raadisid oo talada aasiga ka bilaawdo. sidookale shaqsiyaad ka soo jeeda degaanoka baxsan Hiiraan sida galgaduud aya ku taliyey in aan shirka beelo ay ka mid yahiin beesha Xawaadle lagu soodarin laakinse shaqsiyaad ay u arkeen saaxiibo gadaal loog ahseegay fikirka shirka.
Hadaba talooyin intooda badan ku socday C/qadir Xaaji Masale oo reer Belet Weyne ah ayaa inaga soo gaarayey 24tii saac ee inadhaaftay waxgarad, aqoonyahano iyo dhalinyaro siyaabo kala duwan uga hadlayey shirkaan lagu wado inuu London ka dhaco July, 24 ilaa 25ka iyagoo marka la soo gaabiyo fikirkooda ay iskugu soo biyo shubatay sidan.
Waxaan walaalkeen siyaasiga Somaliyeed ahna aqoonyahan reer Belet Weyne ah ninka lagu magacaabo C/qadir Xaaji Masale oo ka mid ah walaalaha reer Hiiraan ee shirkaan abaabulayo kula talineynaa isaga iyo reer Xaaji Masalaba ineysan ka mid noqon ururo siyaasadeed oo wax lagu yeelayo amaba lagu kala fogeynayo shacabka reer Hiiraan. shaqsiyaadka ka soojeeda Galgaduud ee markasta ku hadaaqa howlahan wax dhib ah uma aragno waayo waxey ka mid tahay noloshooda iney maalinba shacab Somaliyeed iyagoo is maqiiqayo ay howl aysan socodsiinteeda awood u laheyn marka ay wanaag ku bilaabato waji kale u yeelaan marka C/qadir Xaaji Masalow hadadba 20 sano ka qeyb qaadan weysay shirarkii reer Hiiraan ee shacabka lagu jahwareerin jiray midka aad hada horboodeyso sumcadaada ka ilaasho ayaa qaar fariimaha dadweynaha ka imaanayey ka mid ahaa.
hadaba maxuu yahay xalka kaliya ee reer Hiiran u furan maanta.
1- Reer Hiiraan uma baahna ururo cusub oohor leh waxey u baahan yahiin kuwa hada jira in la mideeyo.
2- In shaqsiyaadka Hiiraan ku noolaa dhawr sano oo waalidkood oo shaqo Askarnimo amab howlo shaqokutagay halkaas ay howshooda ku egaato reer Hiiranimo iyo iyosidii ay nabad ugunoolaan lahaayeen Hiiraan iney ka shaqeeyaan laakinse ay joojiyaan waxyaabaha aan munaasibka aheyn ee ay ku kacaan oo laga yaabo in laga dhaxlay dagaaladan sokeeye.
3-In aan leysku qaldin kuwada noolaan shaha Hiiraan iyo aayakatalintiisa cida leh.
4- In shirkaan dib loodhigo lagana hortago wxyaabaha tashuushka keeni karo.
5- In gurmad deg deg ah lala gaaro ciidamada xoogaga reer Hiiraan ee dagaalka ba'an kula jira argagixisada Hiiraan joogto waba kuwa hada shirayo haduu Hiiraan ka jogo wiil u dhimanayooo naftiisa u hibeeynayee.
Ugu danbeyn waxaa qoraalada qarkood ay si weyn ula dardaarmayeen C/qadir Xaaji Masale ama ha qaato ama shirkaan haka qeyb galee.
Inkasta oo uu hada shir shirkaasi looga soo horjeeda laga abaabulayo London oo ay qaban qaabadiisa socoto hadane shacbaka Hiiraan iyo somaliya maanta waxey u baahan yahiin kaalmo bini'aadaminimo maadmaa ay dalka ku dhufteen abaaro laga yaabo iney galaftaan malaayiin Somaliya ah amaba si kale hadaan u dhigno dad iyo duunyo.
La soco wararkeena danbe ee shirka lagu dhisayo maamul goboleedka cusub.
· admin on July 06 2011 13:47:01 · 0 Comments · 2698 Reads ·
15,247,943 unique visits